သငျ့စိတျထဲက မကောငျးတဲ့အတှေးတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ နညျးလမျး (၅)ခု - ONE DAILY MEDIA
သငျ့စိတျထဲက မကောငျးတဲ့အတှေးတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ နညျးလမျး (၅)ခု
လူတိုငျးရဲ့စိတျထဲမှာ ကောငျးတဲ့အတှေးနဲ့မကောငျးတဲ့အ တှေးဆိုတာရှိမှာပါ။ လူတှရေဲ့သဘောကိုက မကောငျးတဲ့သ တငျး၊ မကောငျးတဲ့စကားတှမှောဆိုရငျ ပိုပွီး အာရုံစိတျဝငျ စားမှုရှိတတျ ကွပါတယျ။ မကောငျးတာကို သှားပွီးအာရုံ ထားလလေေ မကောငျးတာတှနေဲ့တငျ အတှေးတှကေ တဝဲ ဝဲ တလညျလညျဖွဈလနေဲ့ ပိုပွီး စိတျညဈညူးရပါတယျ။ အဲဒီ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့စိတျက မကောငျးတဲ့စိတျခံစားခကျြတှေ ဖွဈပျေါလာပွီး ကိုယျ့ရဲ့အပွုအမူတှေ၊ အတှေးအချေါတှေ၊ ကိုယျ့ရဲ့အပွောအဆိုတှဆေီကိုပါ တဆငျ့ပွနျရောကျပွနျပါ တယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အပွုအမူ၊ အတှေးအချေါ၊ အပွောအဆိုအား လုံးက အဆိုးဘကျသှားတဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့လကျရှိဘဝမှာ ဘယျလိုမှအဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့စိတျ ထဲက မကောငျးတဲ့အတှေးတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့လိုပါ တယျ။ သငျ့စိတျထဲမှာရော အဲဒီ့လိုမကောငျးတဲ့စိတျအတှေး တှရှေိနမေယျဆိုရငျ အောကျပါအခကျြလေးတှအေတိုငျး လိုကျနာကွညျ့ပွီး ထိနျးခြုပျကွညျ့လိုကျပါနျော။
၁) သငျ့အတှေးတှကေို သတိထားပါ
ပထမဆုံးက သငျတှေးနတေဲ့အတှေးတှကေို သိဖို့လိုပါတယျ။ သငျကကောငျးတဲ့ဖွဈရပျတှမှောအာရုံထားမိနသေလား? ဆိုးတဲ့ဖွဈရပျတှမှော အာရုံမြားနသေလား? စသဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပွနျမေးဖို့နဲ့ ကိုယျ့အတှေးတှကေို သတိထား ဖို့လိုတာပါ။ သငျ့အတှေးကိုသိနတေဲ့အခါ သငျ့အတှေးကို သငျပွနျပွီး စီမံနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ- ကိုယျ့အကွောငျးကိုမ ဟုတျတမျးတရား ပွောနတေဲ့သူတှအေကွောငျးခညျြး စဉျး စားမိနတေယျဆိုရငျ ကိုယျက မကောငျးတဲ့အာရုံကို စတငျတှေး မိနပေါပွီ။ “သူတို့က ငါ့ကိုမဟုတျတာတှပွေောတယျ” ဆိုပွီး ဒေါသတှထှေကျမယျ၊အတငျး ဖွရှေငျးခငျြမယျ၊ ပွော တဲ့သူကို တခုခုတုံ့ပွနျခငျြစိတျတှဖွေဈလာမယျ စသဖွငျ့ပေါ့ မကောငျးတဲ့ခံစားခကျြတှကေို သငျ့ခေါငျးထဲအမြားကွီး ထညျ့မိလာပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလိုဖွဈလာတာနဲ့ ကောငျးတဲ့ စိတျအာရုံဘကျကိုပွနျပွောငျးဖို့ သငျ့ကိုယျသငျသတိပွနျ ပေးလိုကျပါ။
၂) အလုပျကို မြားမြားအာရုံစိုကျလိုကျပါ
အဲဒီလိုမကောငျးတဲ့စိတျအာရုံခံစားမှုတှစေတငျဖွဈပျေါလာပွီလို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသတိထားမိတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့စိတျကို တခွားတခုခုကိုအာရုံထားလိုကျပါ။ အလုပျမြားမြားလုပျ လိုကျတာက ပိုပွီး စိတျထဲကမကောငျးတဲ့ခံစားခကျြတှေ ကိုပွပြေောကျစပေါတယျ။ ရုံးအလုပျဖွဈဖွဈ၊ အိမျမှုကိစ်စ အိမျအလုပျဖွဈဖွဈ အလုပျကို မြားမြားအာရုံထဲထညျ့ပွီး လုပျနလေိုကျတာက မကောငျးတဲ့ခံစားခကျြကို ပြောကျစေ ပါတယျ။
၃) မကောငျးတဲ့ခံစားခကျြဖွဈပျေါစတေဲ့သူတှကေို ရှောငျပါ
ကိုယျ့ကို စိတျခံစားခကျြမကောငျးစတေဲ့သူတှေ။ ဥပမာ- သငျ့ကိုအတငျးပွောတတျသူတှေ၊ သငျဘာလုပျလုပျအပွဈ ပွောတဲ့သူတှေ၊ သငျ့ကိုအကောငျးမထငျသူတှကေို အတတျ နိုငျဆုံးရှောငျပါ။ အဲဒါက သငျ့ကိုမကောငျးတဲ့စိတျခံစား ခကျြဖွဈပျေါမှု နညျးစပေါတယျ။ သူတို့ကိုပွနျပွီး မတုံ့ပွနျ ဖွဈတော့လို့ သငျ့အတှကျလညျး မကောငျးတဲ့စိတျခံစား ခကျြ မဖွဈစသေလို၊ သငျ့စိတျထဲ တအုံနှေးနှေးနဲ့ မခံစားရ တော့ပါဘူး။
၄) စိတျရော၊ ကိုယျပါအနားယူလိုကျပါ
သငျ့စိတျထဲမှာ အရမျးကို မကောငျးတဲ့စိတျခံစားခကျြတှနေဲ့ ဖိစီးနပွေီလို့ထငျတဲ့အခါ သငျ့စိတျရော၊ ကိုယျရောကို အနား ပေးလိုကျပါ။ အိပျရေး၀၀ အိပျလိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘာကိုမှ မတှေးဘဲ တဈယောကျတညျးငွိမျနလေိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ တ ရားထိုငျလိုကျတာ၊ ယောဂကငျြ့လိုကျတာပဲဖွဈဖွဈလုပျရငျး အနားပေးလိုကျပါ။
၅) ငွိမျ့ညောငျးတဲ့သီခငျြးအေးအေးလေးတှေ နားထောငျပါ
အဆိုးမွငျစိတျတှမြေားနတေဲ့အခြိနျမှာ စိတျကို အတတျနိုငျ ဆုံး အေးစတေဲ့သီခငျြးအေးအေးငွိမျ့ငွိမျ့လေးတှနေား ထောငျသငျ့ပါတယျ။ ဘာကိုမှမတှေးဘဲ သီခငျြးနားထောငျ နလေိုကျတာမြိုးပေါ့။ အဲဒီလိုမဟုတျဘဲ ကိုယျ့ခံစားခကျြကို ပိုဆိုးဝါးစတေဲ့ အဆိုးဘကျခံစားထားတဲ့သီခငျြးမြိုးတော့ နားမထောငျသငျ့ပါဘူးနျော။ တကယျလို့ သငျ့မှာ မကောငျး တဲ့စိတျခံစားခကျြတှမြေားနတေယျလို့ခံစားနရေတယျဆိုရငျ အထကျကအဆငျ့တှကေို လိုကျနာကွညျ့လိုကျပါ။ မကောငျး တဲ့အာရုံကို ကောငျးတဲ့ဘကျကိုလှဲလိုကျတဲ့အခါ ကောငျးတဲ့ စိတျအာရုံခံစားခကျြတှမြေားလာပွီး သငျ့အပွုအမူ၊ သငျ့ ခံစားခကျြ၊ သငျ့အတှေးအချေါ၊ သငျ့စကားတှအေားလုံး လညျး အကောငျးဘကျကဖွဈဖို့အလားအလာမြားလာပါ တယျ။ အဲဒီ့အခါ သငျ့ရဲ့နရေ့ကျတှကေလညျး ပိုပွီး ကောငျးတဲ့ ဖွဈရပျတှဖွေဈဖို့မြားလာပါလိမျ့မယျ။ ပိုကောငျးတဲ့စိတျခံ စားခကျြတှဖွေဈလလေေ ပိုကောငျးတဲ့ဘဝကို ဖနျတီးဖို့ခှနျ အားရလာလလေပေါပဲ။
Sharing By:One Daily Media
သင့်စိတ်ထဲက မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု
Five ways to control negative thoughts in your mind
လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကောင်းတဲ့အတွေးနဲ့မကောင်းတဲ့အ တွေးဆိုတာရှိမှာပါ။ လူတွေရဲ့သဘောကိုက မကောင်းတဲ့သ တင်း၊ မကောင်းတဲ့စကားတွေမှာဆိုရင် ပိုပြီး အာရုံစိတ်ဝင် စားမှုရှိတတ် ကြပါတယ်။ မကောင်းတာကို သွားပြီးအာရုံ ထားလေလေ မကောင်းတာတွေနဲ့တင် အတွေးတွေက တဝဲ ဝဲ တလည်လည်ဖြစ်လေနဲ့ ပိုပြီး စိတ်ညစ်ညူးရပါတယ်။ အဲဒီ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်က မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုတွေဆီကိုပါ တဆင့်ပြန်ရောက်ပြန်ပါ တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူ၊ အတွေးအခေါ်၊ အပြောအဆိုအား လုံးက အဆိုးဘက်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဘဝမှာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့စိတ် ထဲက မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါ တယ်။ သင့်စိတ်ထဲမှာရော အဲဒီ့လိုမကောင်းတဲ့စိတ်အတွေး တွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်လေးတွေအတိုင်း လိုက်နာကြည့်ပြီး ထိန်းချုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
၁) သင့်အတွေးတွေကို သတိထားပါ
ပထမဆုံးက သင်တွေးနေတဲ့အတွေးတွေကို သိဖို့လိုပါတယ်။ သင်ကကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာအာရုံထားမိနေသလား? ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာ အာရုံများနေသလား? စသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးဖို့နဲ့ ကိုယ့်အတွေးတွေကို သတိထား ဖို့လိုတာပါ။ သင့်အတွေးကိုသိနေတဲ့အခါ သင့်အတွေးကို သင်ပြန်ပြီး စီမံနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ့်အကြောင်းကိုမ ဟုတ်တမ်းတရား ပြောနေတဲ့သူတွေအကြောင်းချည်း စဉ်း စားမိနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က မကောင်းတဲ့အာရုံကို စတင် တွေးမိနေပါပြီ။ “သူတို့က ငါ့ကိုမဟုတ်တာတွေပြောတယ်” ဆိုပြီး ဒေါသတွေထွက်မယ်၊ အတင်းဖြေရှင်းချင်မယ်၊ ပြော တဲ့သူကို တခုခုတုံ့ပြန်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာမယ် စသဖြင့်ပေါ့ မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကို သင့်ခေါင်းထဲအများကြီး ထည့်မိလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့ ကောင်းတဲ့ စိတ်အာရုံဘက်ကိုပြန်ပြောင်းဖို့ သင့်ကိုယ်သင်သတိပြန် ပေးလိုက်ပါ။
၂) အလုပ်ကို များများအာရုံစိုက်လိုက်ပါ
အဲဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်အာရုံခံစားမှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိထားမိတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို တခြားတခုခုကိုအာရုံထားလိုက်ပါ။ အလုပ်များများလုပ် လိုက်တာက ပိုပြီး စိတ်ထဲကမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေ ကိုပြေပျောက်စေပါတယ်။ ရုံးအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှုကိစ္စ အိမ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ကို များများအာရုံထဲထည့်ပြီး လုပ်နေလိုက်တာက မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကို ပျောက်စေ ပါတယ်။
၃) မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သူတွေကို ရှောင်ပါ
ကိုယ့်ကို စိတ်ခံစားချက်မကောင်းစေတဲ့သူတွေ။ ဥပမာ- သင့်ကိုအတင်းပြောတတ်သူတွေ၊ သင်ဘာလုပ်လုပ်အပြစ် ပြောတဲ့သူတွေ၊ သင့်ကိုအကောင်းမထင်သူတွေကို အတတ် နိုင်ဆုံးရှောင်ပါ။ အဲဒါက သင့်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစား ချက်ဖြစ်ပေါ်မှု နည်းစေပါတယ်။ သူတို့ကိုပြန်ပြီး မတုံ့ပြန် ဖြစ်တော့လို့ သင့်အတွက်လည်း မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစား ချက် မဖြစ်စေသလို၊ သင့်စိတ်ထဲ တအုံနွေးနွေးနဲ့ မခံစားရ တော့ပါဘူး။
၄) စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါအနားယူလိုက်ပါ
သင့်စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ဖိစီးနေပြီလို့ထင်တဲ့အခါ သင့်စိတ်ရော၊ ကိုယ်ရောကို အနား ပေးလိုက်ပါ။ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာကိုမှ မတွေးဘဲ တစ်ယောက်တည်းငြိမ်နေလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တ ရားထိုင်လိုက်တာ၊ ယောဂကျင့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရင်း အနားပေးလိုက်ပါ။
၅) ငြိမ့်ညောင်းတဲ့သီချင်းအေးအေးလေးတွေ နားထောင်ပါ
အဆိုးမြင်စိတ်တွေများနေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ကို အတတ်နိုင် ဆုံး အေးစေတဲ့သီချင်းအေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးတွေနား ထောင်သင့်ပါတယ်။ ဘာကိုမှမတွေးဘဲ သီချင်းနားထောင် နေလိုက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ပိုဆိုးဝါးစေတဲ့ အဆိုးဘက်ခံစားထားတဲ့သီချင်းမျိုးတော့ နားမထောင်သင့်ပါဘူးနော်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ မကောင်း တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေများနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် အထက်ကအဆင့်တွေကို လိုက်နာကြည့်လိုက်ပါ။ မကောင်း တဲ့အာရုံကို ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလွှဲလိုက်တဲ့အခါ ကောင်းတဲ့ စိတ်အာရုံခံစားချက်တွေများလာပြီး သင့်အပြုအမူ၊ သင့် ခံစားချက်၊ သင့်အတွေးအခေါ်၊ သင့်စကားတွေအားလုံး လည်း အကောင်းဘက်ကဖြစ်ဖို့အလားအလာများလာပါ တယ်။ အဲဒီ့အခါ သင့်ရဲ့နေ့ရက်တွေကလည်း ပိုပြီး ကောင်း တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ဖို့များလာပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ခံ စားချက်တွေဖြစ်လေလေ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကို ဖန်တီးဖို့ခွန် အားရလာလေလေပါပဲ။
ခေါငျးလြှျောတဲ့အခါ သငျ့ဆံသားတှကေို ပကျြစီးစသေညျ့ နညျးလမျးမြား